VaGwisai neVamwe Vavo Vochenurwa paMhosva yeKuda Kupidigura VaMugabe
Dare repamusoro nezuro rakarasa mutongo wakatongerwa mutungamiri wesangano reInternational Socialist Organization, VaMunyaradzi Gwisai, nevamwe vavo vashanu avo vakange vabatwa nemhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yevaimbova mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vachishandisa nzira dzekuratidzira sezvakaitika kuTunisia.
Text: Vatongi vaviri vedare repamusoro nezuro vakarasa mutongo wakanga watongerwa varwiri vekodzero dzevanhu vatanhatu avo vakabatwa nemhosva nedare ramejasitiriti yekuronga muna 2011 zvekupidigura hurumende yevaimbova mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kubudikidza nekuratidzira sezvakaitwa kuMiddle East neku North Africa ukokwaidaidzwa kuti Arab Springs kwakaitika kunyika dzakaita seTunisia, Egypt, Bahrain, Libya, Yemen neSyria.
Vatanhatu ava vanoti VaMunyaradzi Gwisai vanove mutungamiri weInternational Socialist Organization muZimbabwe kana kuti ISO uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, VaHopewell Gumbo, Muzvare Antoniter Choto, Edson Chakuma, VaTatenda Mombeyarara pamwe naVaWelcome Zimuto.
Vatanhatu ava vakasungwa pamwe chete nevamwe vanhu makumi matatu nevapfumbamwe mushure mekuona kwavakaita vhidhiyo yekuratidzira kwakange kwaitwa kuTunisia pamusangano wakaitirwa muHarare.
Mushure mekutongwa kwavo, vatanhatu ava ndivo vakabatwa nemhosva yekuronga kuita zvemhirizhonga nechinangwa chekubvisa VaMugabe pachigaro.
Mushure mekunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare repamusoro naVaGwisai nevamwe vavo vashanu, vatongi vedare repamusoro vanoti VaCharles Hungwe naVaNeville Wamambo vakarasa mutongo wakanga waturwa nedare pamwe nekubatwa kwavakaitwa nemhosva vachiti kuona vhidhiyo chete hakuratidzi kuti vanhu ava vaironga zvekupidigura hurumende pasina humbowo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti vasungwa ava vaironga zvekukonzera mhirizhonga munyika.
Mumwe wevanhu ava, VaHopewell Gumbo vanoti varikufara zvikuru nemutongo wakaturwa nedare kunyange hazvo vakange vatopikira mutongo wavakange vatongerwa.
VaGumbo vanotiwo kunyange hazvo vaipomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yaVaMugabe iyo yavairamba, zvakazobudawo hazvo pachena kuti VaMugabe vakange vasisadiwe neveruzhinji sezvo vakazobviswa pachigaro nevamwe vavo vari muZanu PF avo vakabatsirwa nemauto kuvabvisa pachigaro gore rapera.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira, VaRashweat Mukundu, vanoti kuraswa kwenyaya yaVaGwisai nevamwe vavo kunogona kuonekwa senzira yemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, yekuedza kuti vatongi vematare vaonekwe sevanhu vanoshanda vasina divi ravanorerekera pamberi pesarudzo dzegore rino.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University, VaTakavafira Zhou veruzhinji ngavachenjerere kufarira n’anga inobata mai huroyi.
Mushure mekubatwa nemhosva yavaipomerwa, VaGwisai nevamwe vavo vakabhadhariswa madhora mazana mashanu pamunhu semari yefaindi pamwe nekushanda kwemaawa mazana mana nemakumi maviri pamunhu wega-wega. Vasungwa ava vanoti vangangoenda kumatare zvakare vachida kuripwa.